Ingqikithi yokukhubazeka unomphela: kuyini, izidingo nokuthi ungasifaka kanjani isicelo | Ezezimali Zomnotho
I-Encarni Arcoya | | Umnotho jikelele
Kuyo yonke iminyaka yokusebenza, ungahlangabezana nezimo ezikwenza ungakwazi ukwenza umsebenzi. Ngalezo zikhathi ungacabanga ngokucela ukukhubazeka okuphelele ngokuphelele.
Kodwa, Kuyini ukukhubazeka unomphela? Ubani ozohlomula kule mpesheni? Ingabe ingenziwa ihambisane nabanye? Konke lokho kungabaza yikhona esizoxazululela kona ngezansi.
1 Kuyini ukukhubazeka okuphelele ngokuphelele
2 Umehluko phakathi kokukhubazeka okuphelele, okuyingxenye futhi okuphelele
2.1 Ukukhubazeka okuhlala njalo
2.2 Ingqikithi yokukhubazeka unomphela
2.3 Ukukhubazeka okungapheli
3 Ngubani ongafaka isicelo se-IPT
4 Ubiza malini ngayo
6 Ungasifaka kanjani isicelo sokukhubazeka unomphela
Kuyini ukukhubazeka okuphelele ngokuphelele
Ngokuya Kwezokuphepha Komphakathi, ukukhubazeka okuphelele ngokuphelele kucatshangwa njenge "Lokho okukhubaza isisebenzi ukuthi senze konke noma imisebenzi eyisisekelo yomsebenzi waso ojwayelekile, inqobo nje uma singazinikela komunye umsebenzi."
Ngamanye amagama, sikhuluma ngakho umuntu ongakwazi ukwenza umsebenzi abekade ewenza kepha akumenzi angakwazi ukwenza okunye. Lokho wukuthi, awungeke ubekhona umsebenzi othile, kepha ungabheka ehlukile.
Umehluko phakathi kokukhubazeka okuphelele, okuyingxenye futhi okuphelele
Ohlelweni lwethu, kukhona izinhlobo ezahlukahlukene zokukhubazeka. Esigxila kukho namuhla ukukhubazeka okuphelele, kepha kufanele kuhlukaniswe phakathi kwengxenye ephelele.
Ukukhubazeka okuhlala njalo
Kuyinto eyodwa ekhubaza umuntu ukwenza imisebenzi yomsebenzi wakhe, ukunciphisa ukusebenza kwabo ngama-33% noma ngaphezulu. Kulokhu, umuntu angaqhubeka nokusebenza kulowo msebenzi, kepha kufanele kubhekwe ukuthi ukukhubazeka kwakhe kusho ukuthi akakwazi ukwenza ku-100% kepha kunalokho amandla okwenza lokho anciphile.
Yilapho lapho umsebenzi Awukwazi ukwenza umsebenzi obukade uwenza emsebenzini wakho. Lokho wukuthi, awukwazi ukwenza imisebenzi okufanele uyenze esikhundleni. Kodwa-ke, ngingaqhubeka nokusebenza kolunye uhlobo lomsebenzi.
Isibonelo kungaba yileso sothisha wasenkulisa. Kungenzeka ukuthi ukugula kwakho kukuvimbe ekusebenzeni nezingane (ngoba unezinkinga zezandla, ukungabi nokuxhumana, njll.) Kepha bekungeke kukuvimbe ekwenzeni omunye umsebenzi, njengokuthuthukisa iziphakamiso zezemfundo zezingane.
Lesi simo yiso esisikisela lokho umsebenzi akakwazi ukwenza noma yiluphi uhlobo lwezohwebo noma lomsebenzi. Lokho wukuthi, akakwazi ukusebenza ngoba ukugula noma isifo sakhe simvimbela ukuthi akwenze.
Kulezi zimo, impesheni ayitholayo ingu-100% wesisekelo sokulawula ngoba akakwazi ukusebenza ngakho-ke akakwazi ukuthola imali ukuze aphile. Ngaphezu kwalokho, uma lokhu kukhubazeka kubangelwa yingozi yomsebenzi lapho inkampani inephutha ngayo, kuzoba nokwanda okuphakathi kuka-30 no-50% wemali yinkampani ngenxa yobudedengu bayo.
Ngubani ongafaka isicelo se-IPT
Yize noma ngubani engacela ukukhubazeka ngokuphelele unomphela, iqiniso ukuthi abazuzi balokhu kufanele bahlangabezane nochungechunge lwezidingo ezizohlolwa, imvamisa yinkantolo yezokwelapha. Lezi zidingo zimi kanje:
Akufanele ube seminyakeni yokuthatha umhlalaphansi. Ngamanye amazwi, sikhuluma ngomuntu ongazange ahlangabezane nezimfuneko zokuba athole ilungelo lokuthola impesheni yomhlalaphansi.
Ukuba sesimweni sokukhishwa, noma ukufaniswa ukukhipha. Okusho ukuthi, ukucela ukukhubazeka ngokuphelele unomphela kumele ube usebenza ngokusebenza, kungaba uyazisebenza noma usebenza.
Yiba nesikhathi sokuqala sohlu. Kulokhu, kuzoya ngeminyaka yomuntu lowo. Isibonelo, uma ungaphansi kweminyaka engama-31 ubudala, umnikelo kufanele ube yingxenye eyodwa kwezintathu zesikhathi esidlulile kusukela eminyakeni yobudala engu-16 kanye neqiniso elidala lesi sicelo sokukhubazeka ngokuphelele unomphela. Uma ungaphezu kweminyaka engama-31 ubudala, kuzodingeka ubuncane beminyaka engu-5.
Ubiza malini ngayo
Ingqikithi yokukhubazeka unomphela ayinayo, njengezinye izinzuzo, inani elinqunyelwe. Lokhu kuzoncika kwisisekelo sokulawula esinaso, nembangela eqala ukukhubazeka.
Isibonelo, uma sikhuluma ngokukhubazeka ngenxa yesifo esijwayelekile, inani elitholakele kuzoba, okungenani, inani elibekwe minyaka yonke eMthethweni Wezezimali Jikelele Wombuso wenani eliphelele lempesheni yokukhubazeka yesifo esijwayelekile, njalo Uneminyaka engama-70 ubudala futhi akekho umlingani othembekile kuye.
Njengomthetho ojwayelekile, inani elihambelana no-55% we-Regulatory Base liyatholakala. Kodwa-ke, kungakhuphukela ku-75% uma umuntu eseneminyaka engaphezu kwengama-55 ubudala ngoba iminyaka yakhe, kanye nokuqeqeshwa anakho, kungahle kunganeli ukuthola umsebenzi omusha.
Kukwandiswa futhi phakathi kuka-30 no-50% uma kwenzeka ukuthi ukukhubazeka okuphelele ngokuphelele kubangelwe yingozi emsebenzini noma yisifo esisemsebenzini. Kuya ngokuthi yini ebangele ukulimala, intela ekhokhiswayo ingagcina ikhuphukile ezothwalwa ngumqashi uqobo, inqobo nje uma eshaya umthetho.
Ingqikithi yokukhubazeka unomphela iyahambisana nokusebenza komsebenzi, kungaba kunkampani eyodwa noma kwenye. Kodwa-ke, lowo msebenzi awunakuba umsebenzi ofanayo okunikeze ukukhubazeka. Okungukuthi, awukwazi ukusebenza entweni efanayo kulokho okhubazeke ngakho, kepha ungenza omunye umsebenzi neminye imisebenzi ehlukile.
Kodwa-ke, ukwanda kwalowo 20% otholwayo ngeke kuhambisane uma kwenziwa imisebenzi, kungaba ukuzisebenza noma ukuzisebenza, kanye nezinzuzo ezitholakala kuleyo misebenzi, isibonelo, ukukhubazeka kwesikhashana noma ukubeletha.
Ungasifaka kanjani isicelo sokukhubazeka unomphela
Uma ngemuva kokufunda yonke into ocabanga ukuthi ungacela lolu sizo, into yokuqala oyidingayo ukwazi ukuthi yimaphi amadokhumenti ozohlinzeka ngawo. Okokuqala, kuzodingeka ukuthi ube ne-DNI yakho noma i-NIE yakho uma ungumfokazi uhlala (noma cha) eSpain. Ngaphezu kwalokho, uma ukukhubazeka unomphela kwenzeka ngenxa yokugula okuvamile, kufanele ufake ukukhokhwa kweminikelo yezinyanga ezi-3 ezidlule; Uma kungenxa yengozi yomsebenzi, noma ngenxa yokugula ngokomsebenzi, kufanele unamathisele ingxenye yokuphatha yaleyo ngozi noma ukugula, kanye nesitifiketi sebhizinisi seholo langempela lonyaka odlule.
Ngaphezu kwalokho, kunconywa ukuthi unikeze amarekhodi ezokwelapha ahlobene nesifo esikukhubaza.
Lapho usunayo yonke leyo mibhalo, ungaya kunoma iyiphi insizakalo Yezokuphepha Komphakathi kanye nesikhungo solwazi ukucubungula isicelo. Lokhu kufanele kube ndawonye nemodeli esemthethweni yokukhubazeka ngokuphelele unomphela. Ingathunyelwa naku-inthanethi, esigabeni seCitizens sekhasi lezokuphepha Komphakathi, inqobo nje uma unesitifiketi sedijithali.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Ingqikithi yokukhubazeka unomphela